कपालमा हाँगा फाट्ने समस्याले वाक्क हुनुहुन्छ ? यस्तो छ फाट्ने कारण र घरेलु उपचार विधी – Post Patrika
मुख्य पृष्ठ /News/कपालमा हाँगा फाट्ने समस्याले वाक्क हुनुहुन्छ ? यस्तो छ फाट्ने कारण र घरेलु उपचार विधी
2,2112minutes read
प्रदूषण र धुलोमैलोका कारण कपाल निकै सुक्खा हुन्छ । कपाल सफा नहुँदा पनि फाट्छ । धेरै चिसो मौसममा कपाल खुला राख्दा पनि सुक्खा भएर फाट्ने गर्छ ।कपाल सफा राख्नु त पर्छ, तर सफा गर्ने नाममा हरेक दिन स्याम्पु गर्नु गलत हुन्छ । हरेक दिन स्याम्पु गर्ने कपाल धेरै फाट्छ ।किनभने, स्याम्पुमा केमिकल हुन्छ । यस्तै स्विमिङ पुलमा धेरै जानेको पनि हाँगा फाट्ने खतरा बढी हुन्छ । स्विमिङ पुलको क्लोरिनयुक्त कडा पानीले कपाल सुक्खा बनाउँछ ।**भिडियो हेर्न तल क्लिक गर्नुहोला **
धेरै कपाल रंग्याउँदा पनि फाट्ने समस्या निम्तिन्छ । हेयर कलरिङ र पर्म गर्ने पनि नियम र मापदण्ड हुन्छ । छिटो–छिटो कलरिङ गर्दा र फरक–फरक कलर फेरिरहँदा अत्यधिक केमिकलका कारण कपाल रुखो हुने तथा फाट्ने गर्छ ।नियमित कपाल काट्ने तथा ट्रिम गर्ने बानी नहुनेको कपाल पनि फाट्ने गर्छ । सधैँ उही अवस्थामा छोड्दा कपाल सिमित अवधिपछि सुस्त गतिमा बढ्ने, अस्वस्थ हुने र फुस्रो हुने हुन्छ ।
कपालमा नियमित तेल नलगाउँदा पनि सुक्खा भएर फाट्छ । नुहाउनुअघि तेल लगाउन आवश्यक हुन्छ । त्यसो त नुहाएपछि चिसै कपालमा मसिनो दाँत भएको काइयो लगाउँदा पनि नकारात्मक असर देखाउँछ ।सस्तो ब्यान्ड–क्लिप प्रयोगले पनि कपाल फटाउन भूमिका खेल्छ । यस्तै, हेयर कस्मेटिक र जेलको अत्यधिक प्रयोगले पनि यो समस्या ल्याउँछ ।
सुन्तलाको रसमा केरा र अन्डा मिसाएर बनाएको प्याक पनि फाटेको कपालका लागि उपयोगी हुन्छ । यो प्याक पनि हरेक हप्ता ३०–४५ मिनेट कपालमा राखेर सादा पानीले पखाल्न सकिन्छ ।दही र पाकेको मेवा बराबर मात्रामा मिसाएर बनाएको प्याक लगाउँदा पनि कपाल नरम र मुलायम हुन्छ । फाटेको कपाललाई व्यवस्थित गर्न यो प्याक उपयोगी हुन्छ ।
क्यास्टर आयलमा ओलिभ आयल या तोरीको तेल मिसाएर हरेक हप्ता मसाज गर्ने र आधा घन्टापछि स्याम्पुले पखाल्ने गर्दा पनि फुस्रो कपाल मुलायम बन्छ कपालका लागि बियर पनि निकै उपयोगी हुन्छ । फाटेको कपाल बियरले भिजाएर आधा घन्टापछि सादा पानीले पखाल्ने गर्दा राहत मिल्छ । सामान्य कपालमा पनि बियर प्रयोग गर्नु राम्रो हुन्छ ।